İmamoğlu wuxuu la kulmay dadka reer Sapanca eek u saabsan Cable Car Watch | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbulİmamoğlu wuxuu la kulmay dadka reer Sapanca
19 / 10 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Gondola, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER
imamoglu wuxuu la kulmay dadka reer sapanca ee kaabayaasha gawaarida fiilooyinka
Madaxweynaha remBB Ekrem İmamoğlu Bolu Dowlada Hoose, Melen Dam iyo Dowlada hoose ee isgaarsiinta Izmit-ka kahor booqashooyinka degmooyinka Sapanca waxay la kulmeen muwaadiniinta ka ilaalinaysa khadka fiilada. İmamoğlu wuu dhagaystay dalabka muwaadiniinta wuxuuna yidhi, amase si dabiici ah ayaan qalbigayga ugu jiraa qalbiga dabeecadda, meel kastoo aan doono. Waan la socdaa in khalad kasta oo lagu sameeyo dabeecadda inuu khiyaanaynayo carruurteenna iyo mustaqbalkeenna. Fahamka qofka iska indha tira ma xukumi karo gobol kasta. Haddii aad iska indhatirto dalabyada qaaska ah, sharciga bulshada u maro sharciga shaqsiga ah, tani ma dhici doonto. ”
Duqa Magaalada Istanbul (IMM) Duqa magaalada Ekrem Imamoglu, degmada Bolu ee ku taal wadada ka hor booqashadiisa waxay joogsatay Sapanca. İmamoğlu wuxuu la kulmay dadka deggan K ofrkpınar Hasanpaşa Neighborhood, kuwaas oo waajib ku ahaa inay wax ka qabtaan mashruuca "Cable Car project ihale," oo ay degeen degmada Sapanca sanadkii hore si ay gacan uga geystaan ​​dalxiiska. Haweenka, ragga, waayeelka, carruurta oo dhammaantood ku wada nool xaafadaha, kuwaasoo daawaday Imamoglu "Wax walba waxay noqon doonaan kuwo aad ufiican" oo qosol iyo jacayl u muujiyay Madaxweynaha IMM. Haweeney dumar ah ayaa ku muujisay jaceylka uu u qabo withmamoğlu ereyada, bu Tani waa wax la yaab leh ya.
DADKA KHATARAHA AH: KAR AYAAN KA SAMEEYAAN RUNTA ”
Isaga oo ku hadlaya magaca xaafada, Madaxweynaha Kırkpınar iyo Gudoomiyaha Naadiga Ciyaaraha banaanka Hüsamettin Koçlu ayaa u sheegay İmamoğlu, “Tani waa goobteena kaliya ee aan isku uruurno dhulgariirka ka dib. Sidoo kale waa deegaanka kaliya ee cagaaran ee Kırkpınar Hasanpaşa Neighborhood. Aagga ay carruurteennu ku ciyaaraan. Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee harada Sapanca Lake oo si toos ah u quudiya barkadda biyaha. Mitirka '5,5-6 mitir' ayaa biyo ka hooseeya. Waxaan ku jirnaa dhibaato weyn. Kama soo horjeedno gaadhiga fiilada koronto. Waxaan rabnaa inaanu guuro. Waa in laga dhisaa mid ka mid ah tuulooyinka u baahan in la horumariyo. Waxay isku dayeen inay nooga dhigaan kuwo nagu soo duulay. Ujeeddadoodu waa in la furo aaggan si loo duwo bilgi.
Waxaan rajeynayaa cod maqlaya digniinahaaga ”
Isagoo sheegay inuu ogyahay dareenka dadka Sapanca, İmamoğlu wuxuu yidhi, "Waan socday oo waan imanayay in kabadan 20 sano. Quruxda meeshan waxay ka timid xasaasiyadda dadka deggan. Waan ixtiraamayaa dadaalkaaga. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku martiqaado labadaba Duqa Magaalada Sakarya iyo Duqa Magaalada Sapanca inay aad ugu taxadaraan howshan. Waxaad fiirisaa arrinta si wax ku ool ah. Tani waa meel si fiican loo yaqaan, oo ay ka buuxaan dalxiis. Waxaad haysaa talo soo jeedin aad si kala duwan maalgashi ugu sameyn karto qodobo kala duwan. Kuxigeenka Sakarya, (CHP) Gudoomiye kuxigeenka kooxda Engin Özkoç ayaa sidookale xiiseynaya howsha. Waa ku xigeen aad xasaasi u ah. Waxaan ku jiraa qalbiga dabeecadda, meel kastoo aan doono. Waan la socdaa in khalad kasta oo lagu sameeyo dabeecadda inuu khiyaanaynayo carruurteenna iyo mustaqbalkeenna. Waxaan rajeynayaa inaad miiska fadhiisanaysid oo aad dhageysan doontid waxaad rabto, codsiyadaada iyo digniintaada.
ALIŞ WAXAAN KA SHAQEEYAA IN AAN SIINO JOOJIN KU SAABSAN NABADA DHAQANKA
Imamoglu, oo mar kale ka jawaabaya mamnuucista hay'adda Haydarpaşa iyo xarumaha Sirkeci ee xusuusta muwaaddiniinta ayaa yidhi, "Waxaan isku dayaynaa inaan sawiro khariidad waddo anagoo xoogga saareyna guusha iyo dhageysiga codka bulshada. Tusaale ahaan, shalay waxaan ku soo ururinay madaxayga udhow 1000 waxaanan idhi, 'Magaalo noocee ah ayaad dooneysaa inaad ku noolaato? Fahamka qofka iska indha tira ma xukumi karo gobol kasta. Tani ma dhacdo haddii dalab shaqsiyeed uu iska indhatiro sharciga bulshada iyada oo loo marayo sharciga shaqsiga. Waa dabeecad bini aadamka, dhab ahaan. Tani sidoo kale waa aaminaadeena. Waa arin ogolaansho. Waa ogolaansho xaafadeed fudud .. Imamoglu, muwaadiniintu way baxeen kadib markii ay qaateen sawirro wada jir ah.
Mashruucii ugu dambeeyay ee Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sapanca
Dadka Sivas ayaa go'aanka ka gaari doona dhismaha xarumaha Sivas
Mitsubishi Electric Turkey, iyadoo ganacsatada Egeli kulmay
Kadib bilowga Mashruuca Marmaray ee Gobolka Anatolia…
Qandaraaska Haydarpaşa iyo Xarunta Tareenka Sirkeci
Khadadka gawaarida fiilada ee Sapanca